थाहा खबर: तानसेन खानेपानी आयोजना : ४५ वर्ष पुरानो संरचना, पानीको जहिल्यै समस्या
तानसेन खानेपानी आयोजना : ४५ वर्ष पुरानो संरचना, पानीको जहिल्यै समस्या
उपभोक्ता भन्छन्, ‘समितिको लापरबाहीले स्तरोन्‍नति हुन सकेन’
पाल्पा : घरमा दुई जनाको परिवार, दुवैजना बिरामी। बाहिर झमझम आकाशबाट पानी दर्किरहेको छ। घरभित्र पिउने पानीको अभाव छ।
तानसेन नगरपालिका-२ मेहलधाराका ५५ वर्षीय भीमलाल भट्टराईको दुखेसो हो यो। धारामा पुगेर पानी घरसम्म ल्याउँदा एक घण्टा समय बित्छ। खानेपानीकै कारण बिरामी मान्छे झन् बिरामी भएको उनले सुनाए।
तानसेन नगरपालिका–३ वसन्तपुरकी रामकुमारी रानाको पनि उस्तै दुखेसो छ। पैदल २ घण्टा हिँडेर खानेपानीको जोहो गर्नुपर्छ। यी दुई प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। जिल्लाको सदरमुकामसमेत रहेको तानसेनमा बर्खाको समयमा खानेपानीको हाहाकार हुने गरेको छ। वर्षातको समयमा मुल फुट्ने सिजन हो। तर, गएको असारदेखि १०-१२ दिनमा धारामा पानी आउने गरेको रानाले बताइन्।
कोरोना महामारीबीच धाराबाट घण्टौँ समय लगाएर पानी बोकेर खानुपर्ने तानसेनबासीको दैनिकी जस्तै बनेको छ। यहाँका नागरिक कहिले खानेपानी उपभोक्ताको कार्यालय त कहिले नगरपालिकामा 'डेलिगेसन' गइरहेका हुन्छन्। तर, मागको कुनै सुनुवाइ नै हुँदैन। समितिको लापरबाहीले तानसेनमा खानेपानी अस्तव्यस्त बनेको भीमलाल भट्टराईले बताए। विगत तीन महिनादेखि कम्तीमा एक हप्तामा धारामा पानी आउने गरेको छ। त्यही पनि थोरै समय।
४५ वर्ष पुरानो आयोजना
०३३ सालमा सिस्नेमुलबाट तानसेनमा खानेपानी ल्याइएको थियो। २० वर्षपछि भुल्केको पानी थप गरियो। जतिबेला १ हजार ७७६ धारा वितरण गरिएको थियो। अहिले त्यो संख्या बढेर ३ हजार ९९२ पुगेको छ। तर, पानीको भने २० वर्ष पहिलाकै अवस्थामा छ।
४५ वर्ष पहिला निर्माण गरेका संरचनाबाट ल्याएको पानीले तानसेन बजारमा खानेपानीको गुजारा चलिरहेको छ। पछिल्ला समयमा पम्प र मोटर मात्रै नयाँ फेरिएका छन्। तर, बिग्रिरहन्छ। यी मूलको पानी व्यवस्थापन गर्ने वितरण प्रक्रिया प्रभावकारी बनाए समस्या नहुने कतिपयको बुझाइ छ।
उपभोक्ताको समस्याप्रति समितिको उदासीनता
पटक-पटक उपभोक्ताले गुनासो गर्दा समितिले वास्ता गरेको छैन। पानी किन नआएको हो? भन्ने पीडितको प्रश्नमा खानेपानी उपभोक्ता समितिको कार्यालय र पदाधिकारीले विद्युत् हो भन्ने रेडिमेट जवाफ दिन्छन्।
समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष डाक्टर पुरनमान बज्राचार्यले धारामा पानी दिनदिनै आएको गैरजिम्मेवारी जवाफ दिन्छन्। उनी भन्छन् ‘कसको घरमा हो? नआएको। त्यो मान्छे लिएर तपाईं पनि कार्यालय आउनुस्। समस्या के रहेछ बुझौंला।’
कहिलेकाहीँ विद्युत अनियमित भएका कारण समयमै पानी आउन नसकेको उनले अर्को जवाफ दिए। मूलमा वैकल्पिक पम्प र मोटर जडान गरेको बज्राचार्यले बताए। अब समस्या नहुने उनले ठोकुवा गरे। यता, उपभोक्ताको समस्या कष्टकर बन्दै गइरहेका छन्। उनले ५ दिन अघि पम्प जडान गर्ने काम सकिएको बताए। [यो समाचार तयार पार्दासम्म पम्प जडानको काम सकिएको छैन।]
छिनिछिनमा बिग्रिन्छन् उपकरण
यहाँ प्रयोग गरिएका पम्प र मोटर प्रायः बिग्रि नै रहन्छन्। बिग्रिएका पम्प र मोटरको समयमै मर्मत नहुँदा खानेपानीको समस्या भएको उपभोक्ता समितिका कोषाध्यक्ष भीमसेन कार्कीले बताए। 'बिग्रिएका उपकरण बनाउन बुटवल लैजानुपर्छ। यो सामग्री अत्यधिक भारी उपकरण छन्', उनी भन्छन्।
स्टेशनबाट बोकेर गाडीसम्म लैजान कम्तीमा १० जना जनशक्ति चाहिने र एउटा उपकरण बिग्रिए कम्तीमा मर्मत गर्ने समय तीन दिन लाग्ने उनले बताए। 'पहिला जमिनमा राखेर पानी तान्ने काम हुन्थ्यो। अहिले पम्प इनारभित्रको पानीमा नै राखेका छौं। जसले गर्दा विद्युत् महसुल खर्च कम भएको छ। तर, पानीमा राखेर चलाउँदा छिटो छिटो बिग्रिने गरेको छ', कार्कीले सुनाए।
भारतीय कम्पनी केएसपि, लुदी, पेट्रोलाका पम्प प्रयोग हुँदै आएको उनले बताए। एउटा पम्पको मूल्य ५ लाखसम्म पर्छ। मर्मत गर्दा तीन लाखसम्म खर्च हुने गरेको कार्कीले बताए। कमसल खालका पम्प र मोटर खरिद गर्ने र गुणस्तरहित मर्मत प्रक्रियाले पटक पटक बिग्रिने गरेको उपभोक्ताको आरोप छ।
विद्युत् उपलब्ध भएकै छ
खानेपानीका स्टेशनमा आवश्यकताअनुसार नै विद्युत उपलब्ध हुँदै आएको नेपाल विद्युत् प्राधिरकण पाल्पा शाखा प्रमुख सुशील पौड्यालले बताए। ' पानीको लागि ३८० भोल्ट आवश्यक पर्छ। त्यहाँ हामीले उपलब्ध गराएका छौं', उनले भने।
मेयर शाही भन्छन्, 'समिति जवाफदेही भएन'
समितिका पदाधिकारी उपभोक्ताको समस्याप्रति जवाफदेही नभएको तानसेन नगरपालिका प्रमुख अशोककुमार शाहीले बताए। स्थापनाकालमा जस्तो थियो। त्यस्तै अवस्थामा अहिले पनि खानेपानीका गतिविधि चलिरहेको प्रति शाहिको असन्तुष्टि छ।
'उपभोक्ताको असुविधलाई समितिले बेवास्ता गरेको छ। योजनाविहीन ढंगले सञ्चा‍लन गरिरहेको छ', उनले भने, 'मुलको पानी व्यवस्थापन गरिएको छैन। वितरण प्रक्रिया वैज्ञानिक छैन्। सेवा शुल्क मनपरी लिने काम भइरहेको छ।' १० हजार लिटर बराबर ३०० रुपैयाँ तिर्दै आएका छन्। यसलाई घटाएर १५० बनाउनुपर्ने शाहीले बताए।
लामो समयदेखि आम्दानी खर्चसमेत सार्वजनिक भएको छैन। स्थानीय तहलाई अहिलेसम्म कुनै प्रतिवेदन बुझाएका छैनन्। यसले समितिको कामप्रति शंका उत्पन्न भएका छन्। उपभोक्ताले प्रभावकारी सेवा सुविधा पाएका छैनन्। मर्मत गुणस्तरहीन भएका छन्। पटक-पटक समस्या दोहोरिरहेका छन्। कार्यालयका गतिविधि र आम्दानी खर्चबारे पारदर्शी नभएको नगरप्रमुख शाहीले बताए।
यसअघि खानेपानी उपभोक्ताको सहुलियतका लागि तानसेन नगरपालिकाले समितिलाई अनुदानमा बजेट उपलब्ध गराएको समेत उनले बताए। त्यो समयमा उपभोक्ताले न्यूनतम १०० रुपैयाँ तिर्नुपरेको थियो।
उपभोक्ता खानेपानीको माग गर्दै नगरपालिकामा डेलिगेसन आएको उनले बताए। 'उनीहरूका माग सम्बन्धमा समितिसहित सर्वपक्षीय छलफल भयो। तर, सहमति कार्यान्वयन भएन।
हाल प्रयोगमा आएका मूलमा रहेको पानीको उचित व्यवस्थापन गरिएको छैन्। मूलको पानी व्यवस्थापन गर्ने, भौतिक संरचना तथा उपकरणको गुणस्तरीय मर्मत सम्भार र वितरण प्रणालीलाई चुस्त बनाउन सके खानेपानीको हाहाकार हुने छैन', शाही भन्छन्।
खानेपानीको स्वामित्व नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेमा उपभोक्तालाई सहुलियतपूर्ण तरिकाले नियमित खानेपानीको व्यवस्था मिलाइने शाहीले दाबी गरे।
मासिक १९ लाख शुल्क उठ्ने
खानेपानी समितिले उपभोक्ताबाट मासिक १९ लाख रकम सेवा शुल्कबापत रकम उठाउँछ। वार्षिक २ करोड ३० लाख शुल्कबापतको रकम उपभोक्ता समितिको कार्यालयलाई प्राप्त हुन्छ। अन्य निजी तथा सरकारी कार्यालयबाट विभिन्न अनुदान तथा योजनाका लागि बजेट प्राप्त हुने गरेका छन्। अहिलेसम्म कुनै पनि बजेट तथा कार्यक्रमको हिसाबकिताब सार्वजनिक भएको छैन।
नेपाल सरकारले कोभिडका बेला समस्यामा परेका उपभोक्ताको राहतका लागि तानसेन खानेपानी उपभोक्ता समितिलाई ४८ लाख बजेट उपलब्ध गराएको छ। बैशाख, जेठ, असार र साउन महिनामा उपभोक्ताबाट लिइने शुल्कमा राहत दिनको लागि उक्त बजेट उपलब्ध गराएको बुझिएको छ।
त्यही बजेटबाट साउन महिनाको शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिएको कोषाध्यक्ष भीमसेन कार्कीले बताए। बाँकी रकमबाट भदौ महिनाको शुल्कमा छुट दिने तयारी भइरहेको उनले बताए।
कालीगण्डकी आयोजना अन्योलमा
तानसेन–कालिगण्डकी पाल्पा (बृहत पम्पिङ) खानेपानी आयोजना वर्षौं बित्दासमेत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छैन। २०७४ जेठ ७ गते खानेपानी योजना निर्माण गर्नको लागि रमन मृत्त संजीवनी जेभी कन्ट्रक्सन प्रा.लि. काठमाडौंसँग सम्झौता भएको थियो। केही संरचना निर्माणका काम बाँकी रहेको संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना अर्घाखाँचीका इन्जिनियर विजय खरेलले बताए। उनकाअनुसार पूर्णरूपमा सम्पन्न हुन आगामी वैशाखसम्म लाग्न सक्छ।
कालीगण्डकी नदीबाट १०४४ मिटर उचाइमा रहेको तानसेनस्थित बतासेमा पानी पम्प गरिएको छ। ६ स्टेजमा लिफ्टिङ गरेर पानी ल्याइएको छ। पहिलो स्टेजअन्तर्गत निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ। आयोजनाको दोस्रो स्टेज अप्रेशन एण्ड मेन्टेनेन्सको काम अहिले भइरहेको उनले बताए।
एक महिनाअघि यस आयोजनाको पानी तानसेनमा ल्याएर परीक्षण गरिएको थियो। वर्षातको बेला खोलामा मिसिएको धमिलो पानी आएपछि अहिले बन्द गरिएको छ।
आयोजनाको पहिलो ठेक्काअन्तर्गत निर्माण गरिएको इनारबाट अनुमान गरिएको पानी नआएपछि अर्को समस्या थपिएको छ। प्रतिसेकेण्ड ३६ लिटर पानी आउनुपर्ने थियो। अहिले २२ लिटर आउने गरेको खरेल बताउँछन्। पानीको मात्रा पुरा गर्न अहिले अर्को इनार बनाउने काम भइरहेको छ। एकपटक खनेको इनार गत साउनमा बाढीले पुरेको छ। फेरि अर्को खन्ने तयारीमा रहेको खरेलले बताए। एउटा इनार कम्तीमा १२ मिटर गहिरो हुनुपर्छ।
दोस्रो ठेक्काअन्तर्गत थप एउटा सम्पवेल र प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ। तर, सम्झौता भएअनुसार आगामी माघ २९ गतेसम्म काम सम्पन्न हुने सम्भा‍वना न्यून छ। संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना अर्घाखाँची र भिमेश्वर राजेश्वरी जिएस जेभि कम्पनीबीच सम्झौता भएको हो। आगामी माघ १५ भित्र निर्माण कार्य सक्नेगरी ६ करोड ७ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको खरेलले बताए। अहिलेसम्म ५ प्रतिशत काम पनि भएको छैन।
तानसेन बजारदेखि झण्डै १३ किलोमिटर तल तानसेन नगरपालिका–१३ छेर्लुङस्थित कालीगण्डकी किनारमा लिफ्टिङ खानेपानीको काम सञ्चा‍लन भइरहेको छ।